"Isbitaalku wuxuu leeyahay canugeyga wuu dhintay kadib markii ay korsadeen lamaane" - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
"Isbitaalka wuxuu leeyahay canugeyga wuu dhintay kadib markii ay korsadeen lamaane" - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY On Feb 16, 2021
Qirashadan hooyo ee ay gudbisay Daily Dot dhiiri galiso rafaad daran. In kasta oo macluumaadku ka maqanyahay in la caddeeyo run ahaanta markhaatigan, haddana waxay muujineysaa xaqiiqda qallafsan ee waalidiinta qaarkood ee dhibanayaal ka ah korsashada sharci-darrada ah.
Waxay u qaadatay in gabadheedu dhimatay
Haddii safarka hooyadan madow uu si gaar ah u taabanayo, waa sababta oo loo sheegi lahaa warkii ugu xumaa ee waalid maqlo, in dhimashada ilmaheeda. Markii ay umushay, Damea Morris ayaa la sheegay inay ogaatay in canugeeda oo ay rumeysan tahay inuu dhintay, ay korsadeen waalidiin cadaan ah. Xaaladda Facebook oo hadda la tirtiray, waxay dalbaneysaa runta ku saabsan aayaha inanteeda yar. Markhaatifurkaani wuu fidi lahaa oo wuxuu dhaqaajin lahaa webka.
Isbitaalku ma uusan siin lahayn shahaadada dhimashada
Xaaladda ay Damea daabici laheyd, waxay uga sheekeyneysaa sheekadeeda murugsan iyo leexasho. Bishii Sebtember 6, haweeneyda ayaa la sheegay inay ku dhashay gurigeeda gabadheeda yar Raela. Aabaha ayaa markaa la sheegay inuu keensaday haweeney caawisay kahor intaysan ambalaaska imaan. Kan dambe ayaa dhihi lahaa ilmuhu ma neefsanayo. Si kastaba ha noqotee, markii caawimaad la gaadhay, ilmuhu wuu ooyayay markii xudunta la jaray.
Little Raela ayaa markaa loo qaaday isbitaalka halkaas oo dhakhaatiirtu waxay leeyihiin loo malaynayo ku dhawaaqayx waalidkeed inay dhimatay. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax dukumiinti ah oo cadeynaya dhimashada dhalaanka cusub. Hooyadan ayaa sidoo kale la sheegay inay raadisay kaalmo sharci si ay u hesho cadeyn muujineysa in gabadheeda ay si dhab ah u dhimatay. Waxay ahayd markaa inay baran lahayd inuu ilmaheeda la joogo Joanne Lentner.
Waalidiinta korsanaya waxay diiwaangelin lahaayeen taariikhdooda
Ka dib markii ay dhaleeceeyeen waalidiinta ardayda aawadood ...
Waxay dishaa geri, wadnaha ayey ka jeexjeexeysaa waxayna ku dhajineysaa sawirka ...
Faa'iidooyinka cajiibka ah ee cunista miraha duudduuban ...
Waxyaabo badan oo iskaga mid ah ayaa ku hogaamin lahaa hooyada Raela inay ku dhacdo wadadaas. Korsashada waalidku waxay dhici lahayd 6da Sebtember, isla maalintaas sida la sheegay ilmuhu dhashay. Qoyska la korsaday ayaa lagu soo waramayaa inay hayaan xusuus qor internet halkaas oo lamaanaha ay kaga wada hadleen qisadooda. Boggan waxaa loogu magac daray "Safarka J&J ee korsashada" halkaasoo labada waalid ee korsanaya ay ku markhaati fureen farxadooda ku aadan soo dhaweynta cunug 15 toddobaad ka hor. Kuwan dambe waxay bilaabi lahaayeen inay tixgeliyaan inay korsadaan 2015. Sida ay iyagu qabaan, waxaa la soo xiriiri lahaa isla isbitaalka ay ku dhalatay Raela oo u sheegay kuwa korsada in qolka umulistooda uu xirmayo ayna leeyihiin bukaankii ugu dambeeyay.
Sheekadan waxay ku faafi lahayd barta Twitter
Xirfadiisa Damea kama tagi laheyn shiraac aan dan ka laheyn. Isticmaalaha oo lagu magacaabo @mami_manii_a ayaa wadaagay dhowr shaashadood oo ah muuqaalka hooyada. Faallooyinka badan ayaa markhaati ka noqon lahaa iskaga mid ahaanshaha adag ee u dhexeeya Raela iyo waxa noqon karay walaasheed weyn laakiin yaa qaadan doona qoys cad. Faallooyinka Twittos, waxaan ka akhrisan karnaa: "Waa 1000% walaalo ah". Astaamaha Joanna Lentners iyo Jack ayaa lagu soo waramayaa in tan iyo markii la tirtiray. Wax yaroo archives oo ka mid ah baloogyadooda ay ku guuleysteen inay dib u helaan. Asxaabteena Daily Dot way awoodi waayeen inay la xiriiraan qoyskan la korsaday.
Isticmaalaha Twitter-ka ayaa ogaanaya sida ay isugu egyihiin labadan caruur - Source: Twitter
Hooyada noolaha waxay bilowday lacag aruurin
Si loo daboolo khidmadaha qaaliga ah ee ay ku bixin lahayd, hooyada dhalashada ayaa sidoo kale lagu soo warramey inay furtay GoFundMe, oo ah madal lacag ururin ah. Laba maalmood gudahood, waxay ku guuleysan lahayd inay hesho 3050 dollars (2524,23 euro). Hadafkiisu wuxuu ahaan lahaa $ 10 (000 euro). On korkeeda, hooyada quusta ayaa lagu soo warramey inay ku qortay taasuma qalmin in ilmaheeda laga qaado waxayna baaq u direen bini’aadamnimada dadka isticmaala internetka. Sheeko ay in badan oo ka mid ahi heleen dhaqaaqin laakiin runnimadeedu weli tahay in la caddeeyo marka loo eego la'aanta ilaha iyo caddaynta mawduucan.
Cawaaqibka nafsiga ah ee korsashada noqon kara lourdes
Haddii, marka laga hadlayo sheekadan, kama mid noqonayso korsashada laakiin waa xatooyo, in reer kale soo dhoweeyo waxay ilmaha u noqon kartaa culays xanuun badan. Weydiisay asxaabteena Psychologies, Michel Soulé, cilmi-nafsi yaqaan, wuxuu ka markhaati kacayaa dhibaatada uu qofku dareemi karo qaabeynta qoyskan. " Ilmuhu wuxuu dareemayaa ka tegistiisa iyada oo calaamad u ah "tayo xumo". Uma qalmo jacayl sababtoo ah isagu ma aha wax la jeclaan karo ”ayaa falanqeeyay khabiirka. Wuxuu intaas ku daray in qiimeyntaan lagu hagaajin karo oo keliya jacaylka waalidkiis u muujin doono, unuga ugu horreeya ee ilmuhu ku soo baxo. Bernard Prieur, oo sidoo kale ku takhasusay cilmu-nafsiga, wuxuu sharxayaa in waalidku ay qasab tahay inuu si gaar ah uga taxadaraa cunug la korsaday maxaa yeelay sharaf-rididdiisa waxay xaqiijineysaa dareenkan diidmada ah ee waalidkiis dhalay. Dareenkan, daacadnimada, naxariista, jacaylka iyo wada xiriirka ayaa ah qiimayaasha muhiimka ah ee lagu xoojinayo isku xidhka iyo kor u qaadida horumarkiisa qoys jecel.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/lhopital-affirme-que-mon-bebe-est-mort-alors-quil-a-ete-adopte-par-un-couple/
TELES RELAY 40698 posts 1 comments
Ayaa taageersan musharaxa Koonfur Afrika ahna bilyaneerka Patrice Motsepe? - Dhalinta Afrika
Sidee Guinea u damacsan tahay inay wax uga qabato - Jeune Afrique
Ka dib markii ay cambaareeyeen waalidiinta ardayda sawiradan darteed "waa la xukumay ...
Waxay dishaa geri, waxay ka ilmeysaa qalbigeeda waxayna ku daabacdaa sawirka baraha bulshada ...
Faa'iidooyinka cajiibka ah ee cunista miraha flax maalin kasta - CAAFIMAAD…
Naag uur leh oo 7 bilood jir ah ayaa meydkeeda laga helay sariirteeda cisbitaalka -…